အ မှတ် ရ နေ သော စ ကား များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အ မှတ် ရ နေ သော စ ကား များ
အ မှတ် ရ နေ သော စ ကား များ
Posted by aye.kk on Jun 11, 2012 in My Dear Diary | 23 comments
အ ဖေ က စ ကား ပြော လျှင် ဒုတ် ထိုး အိုး ပေါက် ပြော တတ် ပါ သည်…..။
အ မေ နှင့် က လုံး ၀ မ တူ ၊ သူ ဥ ပ မာ ပေး သည့် စ ကား များ သည် ၊
နား ၀င် ချို မြ ခြင်း မ ရှိ သည် က များ ပါ သည် ။
အ ဖေ ပြော နေ ကျ စ ကား များ သည် ၊ နား ၀င် ချို မြ မှု မ ရှိ ပါ သော် လည်း တန် ဘိုး ရှိ ပါ ၏ …
ထို အ ထဲ မှ အ မှတ် ရ နေ သော စ ကား များ အား ။ ယ ခု ရက် ပိုင်း အ တွင်း ။ စိတ် မှ ပြော ချင် စိတ် တို့ ဖြစ် ပေါ်
ခံ စား ခဲ့ ပါ သည် ။ သို့ ဖြစ် ၍ ကျ မ ပြော ပြ ချင် သည့် ။ အ မှတ် ရ နေ သည့် စ ကား များ အ တိုင်း ပြန် လည်
ပြော ပြ လို ပါ သည်….။
“လောက် သည် ချီး တော ထဲ ၌ သာ ပျော် ၏ ”..။
လောက် သည် အင် မ တန် ရွံ့မုံး စ ရာ ကောင်း သော သ တ္တ ၀ါ ဖြစ် ၏…။
ထို့ကြောင့် လောက် သည် ။ မ စင် ၌ သာ ပျော် မွေ့ ၏ တဲ့..။
လူ သည် အ သိ ဥာဏ် ရှိ သော သူ ဖြစ် ၍ ၊ ဆင် ခြင် တုံ တ ရား ရှိ ၏ ..၊ လူ သည် ဆင် ခြင် တုံ တ ရား ရှိ သ ဖြင့် တန် ဘိုး ရှိ ၏ တဲ့ …။
ဆင် ခြင် တုံ တ ရား မ ရှိ သော သူ (၀ါ) တ နည်း ပြော ရ လျှင် အ သိ ဥာဏ် မ ရှိ သော သူ သည် ၊ လောက် နှင့် အ တူ တူ ပဲ ၊ ထူး မ ခြား နား ဟု အ ဖေ က ပြော ဆို ဆုံး မ ဘူး ပါ သည်။
လော က ၌ ဆင် ခြင် တုံ တ ရား မ ရှိ သော သူ သည် ၊ အင် မ တန် ရွံ့ မုံး စ ရာ ကောင်း ၏ ဟု လည်း ၊ အ ဖေ က ပြော ပါ သည်…။
ထို့ကြောင့် လောက် နှင့် တူ သော လူ သည် မ ကောင်း မှု အ ရာ ၌ သာ မွေ့ ပျော် နေ တတ် ၏ တဲ့ …။
“ချီး တော ထဲ က လောက်” ၊ “လောက် နှင့် တူ သော လူ” မ ဖြစ် စေ ရန် အ ဖေ က အ မှတ် ရ သော စ ကား များ ဖြင့် ။
ဥ ပ မာ ပေး ခါ အ နှိုင်း ပြ ပြီး ၊ ကျ မ အား ပြော ပြ ထား ပါ သည်..။
“ချီး ဆို သည် မှာ နံ သည်” “မ ကောင်း မှန်း” ကို အ ထူး ပြော စ ရာ မ လို ၊ လူ တိုင်း သိ ပြီး သား ဟု ပြော ပါ သည်။
“ချီး ကို ဒုတ် ဖြင့် မွှေ လျှင် လွန် စွာ အ နံ့နံ လေ” “မ ခံ နိုင် အောင် ပို ဆိုး လေ” ဟု အ ဖေ က ပြော ဆို ပါ သည် ။
ချီး ဆို တာ နံ နေ မှန်း သိ လျှက် ၊ ဒုတ် ဖြင့် မွှေ ပါ က……
အ လွန် နံ လေ ပင် မ ဟုတ် လား ဟု လည်း ပြော ပါ သည်။ “ပြဿနာ” ဆို သည် မှာ “မ ကောင်း မှန်း” လူ တိုင်း သိ ၏ တဲ့..။
“ပြဿနာ” ဖြစ် မှန်း သိ လျှင် ၊ အ ဖြေ မ ရှာ ,မ ဆွေး နွေး , မညှိ နှိုင်း ဘဲ နှင့် ပြဿနာ က ပြီး ဆုံး နိုင် မှာ မ ဟုတ် ဟု အ ဖေ က ပြော ပါ သည် ..။
ပြဿနာ ကို ပြဿနာ မှန်း သိ နေ ပါ လျှက် နှင့် ၊ ပြဿနာ မ ဖြစ် ဖြစ် အောင် ထပ် မံ ၍ အ ပြစ် သ ဖွယ် ပြော ဆို ပြီး မီး မွှေး နေ မည် ဆို ပါ က ၊ အ ကျိုး မ ရှိ သည့် အ ပြင် ၊ ပို ၍ ဆိုး မည် သာ ဖြစ် ကြောင်း ၊ ဥ ပ မာ ပေး ခါ အ နှိုင်း ပြ ပြီး ပြော ဆို ပါ သည်။
တ ရက် တွင် အစ် ကို က ၊ စာ က လေး ငှက် များ ကို လေ သေ နတ် ဖြင့် ပစ် ချ ခါ ၊ အ မွေး နှုတ် ၍ သူ ငယ် ချင်း များ နှင့် အ တူ မီး ကင် စား ကြ ပါ သည်။
အ ဖေ က တွေ့မြင် သော အ ခါ ။ “ နှံ ပြီ စုတ် ငှ က်” က လက် တ ဆုတ် စာ မျှ သာ ။ င ရဲ က တော့ ဆယ် ပိ ဿာ ဟု အစ် ကို အား ပြော ပါ သည်…။
နှံ ပြီ စုတ် ငှ က် သည် ။ လူ ၏ လက် တ ဆုတ် စာ မျှ ပင် ။ ရှိ လင့် က စား ။ သူ့ အ သက် တစ် ချောင်း ကို သတ် ပြီး မှ စား ရ သ ဖြင့် ။ ငါး ပါး သီ လ ကျိုး ပေါက် ၍ ။ အ ပြစ် က ကြီး မား လှ သည် ဟု ၊ အ ဖေ က ဥ ပ မာ ပေး ခါ အ နှိုင်း ပြ ပြီး ပြော ဆို ပါ သည်။
ယ ခု လတ် တ လော တွင် ၊ ကျ မ အ နေ ဖြင့် ဘာ ဖြစ် နေ မှန်း မ သိ ၊ အ ဖေ ပြော သော စ ကား များ ကို ၊ စိတ် ထဲ တွင် ပြန် လည် ၍ သ တိ ရ နေ ပါ သည်။
အ ဖေ ပြော သော စ ကား များ က ။ ကျ မ အ တွက် ။ အ မှတ် ရ နေ သော စ ကား များ ဟု ဆို ခြင် ပါ သည်။။
Sky Heart Winko,…ရေ
ဒါနဲ့ ပဲအဖေပြောတဲ့စကားတွေကိုအမှတ်ပြန်ရနေလို့ ရေးလိုက်မိတာပါ…။
အပြစ်လုပ်ရင်အပ္ပါယ်ငရဲရောက်ရခါ၊ဆီဒယ်အိုးနဲ့ အကြော်ခံရပုံတွေတွေ့ မြင်ပြီးကတည်းကကို
အခုတလောက ပြသနာကိုမီးမွှေးရုံမက ဓါတ်ဆီပါလောင်းနေကြတော့ ပိုခက်ကုန်တာပေါ့အမအေးရယ်။
အမအေးရေ အာဏာရှင်လောင်းရိပ်အောက်တော့ပြန်ရောက်မှာမဟုတ်လောက်တော့ပါဘူး။ စိုးရိမ်မိတာတခုတော့ရှိတယ်။ ဒီရိုဟင်ဂျာတွေက ဘယ်နိုင်ငံကမှ လက်မခံချင်ကြဘူး။ သူ့မူရင်း နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ကတောင် လက်မခံချင်တော့ အနေအစားချောင် တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲတိုးဝင်လာပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာကို အစိုးရအနေနဲ့ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ အစ္စရေးနဲ့ ပါလစတိုင်းလို့ နယ်လုတိုက်ပွဲတွေ အဒွန့်ရှည်သွားမှာကို ပဲစိုးရိမ်မိပါတယ်။ နောက်ပြီးသူတို့နောက်ကွယ်က လူတွေက ဗုံးခွဲကျွမ်းကျင် သူ တွေ ဖြစ်နေလေတော့ ဒီပြသနာအဓွန့်ရှည်လာရင် ကျွန်မတို့မြေပြန့်မှာပါစိုးရိမ်စရာ အခြေ အနေတွေဖြစ်လာမှာကိုပဲပူမိပါတယ်။
အဓွန့်ရှည်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ဖြစ်ခဲ့ ရင်..
လို့ လည်းသူမိန့် ခွန်းထဲမှာထောက်ပြ
သွေးတိုး စမ်းနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျား..
ဘယ်လိုနည်းလမ်းသုံးပြီး ဖြေရှင်းမလဲ၊ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ကြိုမတွေးနိုင်သေးပါ
ဒီကိစ္စတွေဟာ စနစ်တကျဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုရင် စနစ်တကျ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားအောင် မထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ကြဘူး
ဘယ်လူမျိုးတွေ သွေးဆူကြလဲ ဘယ်လူမျိုးတွေဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုတုန့် ပြန်တတ်သလဲ..သိထားသင့်သပေါ့.
ဟင်.. ဟုတ်လား အန်တီအေး သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းဆက်ကြည့်အုန်းမှပဲ။ ဘာတွေများ ဖြစ်ကုန်တယ် မသိဘူး။
အချက်ခြာကျသည့်နေရာ၆ ခုခန့် တွင်ဗုံး(၉)လုံး
လမ်းဘေးစည်ပင်သာယာခုံတချို့ ပျက်စီးသွားတယ်လို့ သိရတယ်..
“လောက်နဲ့ တူတဲ့လူ”တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါပဲလို့ လေ…။။
အန်တီအေးရေ … လူချင်းတူပေမယ့် ခံယူချက်နဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထားပုံခြင်းကွာခြားလို့လည်းပါမယ်ထင်တယ် …
ကိုယ်လည်း အကျိုးမရှိပဲ သူတပါးဘ၀ကိုပျက်ဆီးစေချင်ကြတယ် … စိတ်ဓါတ်မကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့ အသွင်သဏ္ဍန်လို့ ဆိုရမလားပဲနော် … ။
ဆိုတာ … ထောက်ခံမိပါတယ် အန်တီအေးရေ … ။
ဘင်္ဂါလီတွေ … ရခိုင်ထဲရောက်နေတာနဲ့ပတ်သတ်လို့ ….. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအနေနဲ့ … သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေ ဘာတွေ လုပ်ဦးမလားလို့ … နားစွင့်နေတာ …. အခုထိတော့ မကြားမိသေးဘူး ။
“ချီး ကို ဒုတ် ဖြင့် မွှေ လျှင် လွန် စွာ အ နံ့နံ လေ” “မ ခံ နိုင် အောင် ပို ဆိုး လေ” ဟု အ ဖေ က ပြော ဆို ပါ သည် …ချီး ဆို တာ နံ နေ မှန်း သိ လျှက် ၊ ဒုတ် ဖြင့် မွှေ ပါ က……အ လွန် နံ လေ ပင် မ ဟုတ် လား ဟု လည်း ပြော ပါ သည်။
အဲဒီစာလေးဖတ်ပြီး.. တကယ်ကို အသက်ဝင်လာတာ..
အန်တီအေးရေ ကွန်မင်ကို သေချာဖတ်ရင် ချီးပုံမှတ်ပြီး ဝင်လာတဲ့ လောက်ကြီး ကို တွေ့မယ်ဗျ
လောက်ဆိုတာ ချီးထဲမှာဘဲပျှော်တဲ့အမျိုးလေ ကတ္တီပါခင်း ရွှေခင်းနဲ့ထားလဲ သူကမပျှော်နှိင်ဘူး…
aye.kk အဖေပြောတဲ့စကားတွေဟာ တကယ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်… လောက်လိုလူ မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်
ဖြစ်နေခဲ့ရင်လဲ အချိန်မှီပြင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်…ချီးဆိုတာနံတတ်မှန်းသိသိကြီးနဲ့ ပိုနံအောင် တုတ်နဲ့ မမွှေကောင်းဘူးလေ….
လောက်နဲ့ တူတဲ့သူတွေကိုပြုပြင်ဖို့ ကမလွယ်လောက်ဘူး။
တွေက စော်ကားနေပါစေ..ဘုန်းကြီးတွေကို လည်လှီးသတ်နေပါစေ..ဒေါ်စုပြောတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်
သူ့ ကျွန်သဘောက်ဘ၀လက်အောက်ရောက်ခဲ့ကြလို့ 
ခိုင်းနှိုင်းတင်ပြထားပုံလေးက ရိုးရှင်းပြီး နားလည်လွယ်တယ်။ အင်း ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်မိပြီးတော့ အရေးကိစ္စလေးတွေ တွေးစရာ တစ်ပုံတစ်ပင် ရရှိသွားပါတယ်။